राज्यरथीलाई कोरोनाले गम्भीर बनाउला ?
आर्थिक वृद्धि नहुनुको कारण कोरोना मात्रै हो त ?
कृषि नै आर्थिक संकट न्यूनिकरणको उपाय
संसारभर चुनौती थपिँदै जाने र नेपालमा पनि भयाभह स्थिति खडा हुन सक्ने निश्चितजस्तै बन्दा हामीले के गर्ने ?
कोरोनालाई महामारी भने पनि यो महासंकट नै हो किनभने यसले धेरै मानिसको ज्यान लिइसकेको छ र विश्वकै अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकरात्मक प्रभाव छाड्ने त निश्चित नै छ । कुनै रोगका कारण
अमेरिका-इरान द्वन्द्वको सन्त्रासमा अर्थतन्त्र
काठमाडौं । राजधानीबाट शुक्रबार प्रकाशित पत्रपत्रिकाले विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, समाजिक तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर समाचार प्रकाशन गरेका छन् । बिहीबार जनता समाचार डट कम मा ठोरी महोत्सव :
पहुँचवालाबाट अर्थतन्त्र संकटमा
काठमाडौं । पहुँवालाले जुनसुकै समयमा योजना फेरिदिने र भुक्तानी लिने प्रवृतिले अर्थतन्त्र संकटमा रहेको अर्थविद्हरुले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा अर्थविद्हरुले बजेट निर्माण गर्नुभन्दा अघि दौडधुप
अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामाः गभर्नर नेपाल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले नीतिगत सुधारका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २२औँ स्थापना दिवसका
आँपको मू्ल्य दोब्बर : कति थियाे, कति पुग्याे ?
यो वर्षको सोही समयमा काँचो आँपको मूल्य प्रतिकिलो रु १०० देखि १२५ रहेको गाईघाटका आँप व्यापारी रामजी साहले बताउनुभयो ।
अर्थतन्त्र दुश्चक्रमा फस्दै गयो : विनोद चौधरी
सांसद विनोद कुमार चौधरीले संघीयताको खर्च धान्न नसक्ने गरी बढ्दै गएकाले मुलुकको अर्थतन्त्र डरलाग्दो दुश्चक्रमा फस्दै गएको बताउनुभएको छ ।